Gudoomiyaha degmada Gumbax ee gobolka Bari oo codsaday degmada in laga qaybgaliyo qorshaha horumarinta degmooyinka Puntland. – Radio Daljir
Gudoomiyaha degmada Gumbax ee gobolka Bari oo codsaday degmada in laga qaybgaliyo qorshaha horumarinta degmooyinka Puntland.
Boosaaso,Dec, 18-Maamulka degmada Gumbax ee gobolka Bari ayaa ku dhaliilay dowladda Puntland inaysan degmadu ka qaybgalinin shirarka iyo mashaariicda loo qabto degmooyinka kale duwan ee deegaanada Puntland.
Gudoomiyaha degmada Gumbax ee gobolka Bari Faarax Siciid Jaamac oo maanta la hadlayay Radio Daljir ayaa waxaa uu sheegay maamulka Puntland inuu ka gaabiyay horumarinta degmada Gumbax iyo ka qaybgalinta shirarka looga hadlo horumarinta degmooyinka Puntland.
“Cabasho ayaan rabnaa inaan halkaan kusoo gudbino hadaanu nahay maamulka degmada Gumbax,cabashaadaasina waxa ay tahay waxaa jirtay mashaariic loo qaybshay degmooyinka ku yaala Badwaynta Hindiya ee Puntland oo la dagaalanka burcadbadeeda ahaa,degmooyinka oo dhana waa lawada siiyay degmada Gumbaxna waa laga tagay”ayuu yiri gudoomiyaha degmada Gumbax Faarax Saciid Jaamac oo idaacadda Daljir ee Boosaaso maanta booqasho ku yimid.
Waxaa uu sheegay maamulka iyo shacabka degmadu inay ku guulaysteen la dagaalanka kooxaha burcadbadeeda iyo cidkasta oo dhibaato ka gaysanaysa degmada,islamarkaana loo baahanyahay maamulka Puntland inuu gacan ka gaysto horumarinta degmada Gumbax.
Arimaha cabasho ee kasoo yeeraysa maamulka degmada Gumbax ee gobolka Bari ayaa imaanaysa xilli dhowaan dalka Jabuuti lagu soo gabagabeeyay shir looga hadlayay horumarinta degmooyinka Puntland ee saamaynta ku yeesheen kooxada burcadbadeeda.